Ministera Internet - Ny Fiangonan'i Kristy dia mankasitraka anao
Ny Fiangonan'i Kristy dia mandray anao
"Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny fiangonan'i Kristy."- Roman 16: 16
Tongasoa ato amin'ny tranonkalanay. Ny fitsidihanao eto dia tena ankasitrahana, ary mivavaka izahay mba haniry hitsidika anay amin'ny olona rehefa manompo ny Andriamanitsika Andriamanitra Tsitoha miaraka amin'ny fianakaviana iray.
Ao amin'ity tranonkala ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fiangonan'i Kristy ianao. Azonao atao ny manoratra taratasy momba ny fifandraisana amin'ny Baiboly, na manontany anay momba ireo fanontaniana mety hanananao momba ny Baiboly.
Ny Fiangonan'i Kristy dia fianakaviana zanak'Andriamanitra izay voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary manolo-tena hanompo ny Tompontsika sy ny mpiara-belona amintsika. Misy fiangonana maro ao amin'ny fiangonan'i Kristy manerana an'izao tontolo izao. Ao amin'ny fiangonan'ny Tompo dia hahita olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra sy avy amin'ny fiainam-pianakaviana maro izay nantsoina ho firaisana firaisana amin'ny fitiavana sy ny fanekena. Faly isika amin'ny fanomezam-pahasoavana sarobidy nomen'ny Tompo antsika, ary vonona ny hizara ireo fanomezam-pahasoavana sy fitahiana ireo miaraka aminareo izahay. Fantaro azafady fa misy toerana manokana ho anao sy ny fianakavianao eo anivon'ny fiangonan'i Kristy.
Famerenana amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Raha tsy hitanao ny haino aman-jery etsy ambony - download eto: MP4